Aịzaya 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ihe Chineke ga-eme ndị Izrel (1-4)
Chineke ga-eji ndị Asiria gosi na iwe ji ya (5-11)
Ahụhụ a ga-ata ndị Asiria (12-19)
Ndị fọrọ n’ezinụlọ Jekọb ga-alọghachi (20-27)
Chineke ga-ekpe ndị Asiria ikpe (28-34)
10 Ndị na-eti iwu ndị na-enye ndị ọzọ nsogbuNakwa ndị na-ede iwu ha ji emegbu ndị ọzọ ga-ata ahụhụ.+ 2 Ha na-eme ihe ndị a iji mee ka ndị ogbenye ghara inweta ihe ruuru ha,Na iji kpee ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha so ná ndị m ikpe mkpegbu,+Nakwa iji weghara ihe ụmụ nwaanyị isi mkpe,Bukọrọkwa ihe ụmụ na-enweghị nna.*+ 3 Gịnị ka unu ga-eme n’ụbọchị a ga-elebara unu anya,*+Mgbe a ga-esi n’ebe dị anya bịa bibie unu?+ Ònye ka unu ga-agbakwuru ka o nyere unu aka?+ Ònyekwa ka unu ga-ahapụrụ akụ̀* unu? 4 Ụfọdụ n’ime unu ga-eso ndị mkpọrọ hulata ala. A ga-egbukwa ndị fọrọnụ. N’ihi isi ha na-enupụ, iwe ya adajụbeghị,Kama ọ ka welitere aka ka ọ taa ha ahụhụ.+ 5 O kwuru, sị: “Lee onye Asiria,+Onye bụ́ ụtarị m ga-eji egosi na iwe ji m.+ M ga-ejikwa mkpara o ji n’aka taa ndị mmadụ ahụhụ. 6 M ga-eziga ya ka ọ lụso mba kwụsịrị ife Chineke agha,+Ndị kpasuru m ezigbo iwe. M ga-agwakwa ya ka ọ kwata ọtụtụ ihe, bukọrọ ọtụtụ ihe,Zọtọọkwa ebe ahụ, ya adị ka apịtị dị n’okporo ámá.+ 7 Ma, ọ gaghị achọ ime ihe a,Obi ya agaghịkwa abụ ime ya,N’ihi na ihe dị ya n’obi bụ ịla ihe n’iyiNakwa ibibi ọtụtụ mba, ọ bụghị mba ole na ole. 8 N’ihi na ọ ga-asị,‘Ọ̀ kwa ndị isi niile na-ejere m ozi bụcha ndị eze?+ 9 Ọ̀ kwa Kalno+ dị ka Kakemish?+ Ọ̀ kwa Hemat+ dị ka Apad?+ Ọ̀ kwa Sameria+ dị ka Damaskọs?+ 10 M meriela alaeze ndị na-efe chi dị iche iche na-abaghị uru,Alaeze ndị arụsị a pịrị apị ha na-efe dị ọtụtụ karịa nke dị na Jeruselem na Sameria.+ 11 Gịnị ga-egbochi m ime Jeruselem na arụsị ndị dị na yaIhe m mere Sameria na chi dị iche iche na-abaghị uru dị na ya?’+ 12 “Jehova rụchaa ọrụ niile ọ na-arụ n’Ugwu Zayọn nakwa na Jeruselem, ọ ga-ata eze Asiria ahụhụ maka na ọ dị mpako, onwe ya na-ebukwa ya isi.+ 13 Ọ sịkwara,‘Ọ bụ ike mNa amamihe m ka m ga-eji eme ihe a, n’ihi na ama m ihe. M ga-ewepụ ókè obodo dị iche iche,+Kwakọrọkwa akụ̀ ha.+ M ga-emeri ndị bi na ha otú dike na-esi emeri obodo.+ 14 M ga-ebukọrọ akụ̀ ndị dị iche iche n’egbughị oge,Otú ahụ mmadụ na-ewere ihe dị n’akwụ́ nnụnụ n’egbughị oge. M ga-achịkọrọ ihe niile dị n’ụwa,Otú mmadụ si achịrị àkwá a hapụrụ ahapụ. E nweghị nnụnụ ga na-efegharị nku ya. E nweghịkwa nke ga-emeghe ọnụ ya ma ọ bụ bee ubé.’” 15 Anyụike ọ̀ ga-anyara onye ji ya na-egbutu ihe isi? Mma e ji akwọ osisi ọ̀ ga-eche na ya ka onye ji ya akwọ osisi? Mkpara+ ò nwere ike ịna-efegharị onye ji ya? Ka ụtarị ò nwere ike ibuli onye ji ya elu? 16 N’ihi ya, ezi Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha,Ga-eme ka ndị buru ibu n’obodo ahụ* taa ahụ́.+ Ndị Asiria agaghịzi adị ebube. Ha ga-adị ka ihe ọkụ repịara.+ 17 Ìhè na-enwu n’Izrel+ ga-aghọ ọkụ.+ Onye Nsọ Izrel ga-aghọkwa ire ọkụ. Ọkụ a ga-enwusi ike ma repịa ahịhịa na ogwu n’ala ndị Asiria n’otu ụbọchị. 18 Chineke ga-ebibikwa ọmarịcha oké ọhịa ha na ebe ha kụrụ mkpụrụ osisi dị iche iche. Ọ ga-adị ka mgbe ọrịa mere mmadụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma.+ 19 Osisi ndị fọrọ n’oké ọhịa haGa-adịzi ole na ole nke na nwatakịrị ga-agụtali ole ha dị. 20 N’ụbọchị ahụ, ndị fọrọ n’IzrelNa ndị ezinụlọ Jekọb aka na-akpaghịAgaghịzi atụkwasị mba ndị na-alụso ha ọgụ obi.+ Kama, ha ga-atụkwasị Jehova,Bụ́ Onye Nsọ Izrel, obi, na-erubekwara ya isi. 21 Ọ bụ naanị ndị fọrọnụ,Ya bụ, ndị fọrọ n’ezinụlọ Jekọb, ga-alọghachikwute Chineke bụ́ Dike.+ 22 Ndị Izrel, ọ bụ eziokwu na unu dị ọtụtụKa ájá dị n’oké osimiri,Naanị ndị fọrọ n’ime unu ga-alọta.+ Chineke ekpebiela na ọ ga-ebibi unu.+ Ihe a o kpebiri ime unu* zikwara ezi.+ 23 Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, ga-ebibi unuOtú o kpebiri ime n’obodo unu niile.+ 24 Ọ bụ ya mere Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, ji kwuo, sị: “Ndị m, ndị bi na Zayọn, unu atụla egwu onye Asiria ahụ na-apịabu unu ụtarị, onye na-ewelikwa mkpara ya elu ka o jiri ya taa unu ahụhụ+ otú ndị Ijipt mere unu.+ 25 N’oge na-adịghị anya, m ga-akwụsị iwesa unu iwe. M ga-ewesawazi ndị Asiria iwe, laakwa ha n’iyi.+ 26 Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-ewere ụtarị pịa ha,+ otú o mere mgbe o meriri ndị Midian n’akụkụ oké nkume Oreb.+ Ọ ga-agbatị mkpara ya n’elu oké osimiri, weliekwa ya elu otú o mere ndị Ijipt.+ 27 “N’ụbọchị ahụ, a ga-ebutu ibu eze Asiria bukwasịrị n’ubu unu.+ A ga-ewepụkwa yok ya dị n’olu unu.+ A ga-agbajikwa yok ahụ+ n’ihi mmanụ.”* 28 Ọ lụsola Ayat agha.+ O sila na Migrọn gafee. O busakwala ibu ya na Mikmash.+ 29 O sila n’ebe a na-eji ụkwụ agafe mmiri gafee. Ọ rahụrụ na Giba.+ Ndị Rema na-ama jijiji. Ndị Gibia,+ bụ́ ndị obodo Sọl, agbaakwala ọsọ.+ 30 Ndị Galịm, tisienụ mkpu ike. Ndị Leisha, geenụ ntị. Ndị Anatọt, unu ga-atagbu onwe unu n’ahụhụ.+ 31 Ndị Madmina agbaala ọsọ. Ndị Gibịm agala zoo. 32 Ọ ga-akwụsị na Nọb taa.+ Ọ na-echere ugwu Zayọn,Ya bụ, ugwu Jeruselem, aka mgba. 33 Ezi Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha,Na-egbukapụsị alaka osisi ka ha daa gbajisịa.+ Ọ na-egbutukwa osisi ndị kacha too ogologo,Na-emekwa ka ndị dị elu dị ala. 34 O ji anyụike* na-egbutu obere osisi ndị dị n’oké ọhịa. Onye dị ike ga-emekwa ka osisi ndị dị na Lebanọn daa.
^ Ma ọ bụ “ụmụ na-enweghị nne na nna.”
^ Ma ọ bụ “a ga-ata unu ahụhụ.”
^ Ma ọ bụ “ebube.”
^ Ya bụ, ndị Asiria.
^ Ma ọ bụ “Ahụhụ a o kpebiri ịta unu.”
^ Mmanụ a nwere ike ịbụ ụdị nke e ji ete ndị eze mmanụ ma ọ bụkwanụ ụdị nke a na-agbanye na mpanaka.
^ Ma ọ bụ “ngwá ọrụ e ji ígwè kpụọ.”